Bilaogy Maleziana nampiseho sainam-pirenena mitsimbadika · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 19 Marsa 2019 4:05 GMT
Nanomboka ny 3 Aogositra 2008, nanasongadina ny sainam-pirenena (na “Jalur Gemilang “) naseho nivadika ny bilaogy Maleziana sasany ho mariky ny firenena ao anatin'ny fanaintainana. Voalaza fa nataon'ilay bilaogera Sheih fantatra amin'ny anarana hoe ‘kickdefella‘ avy any amin'ny morontsiraka atsinanan'ny firenena ny antso ary bilaogera maro no namaly izany. Sahy naneho ny tsy fanajana ny sainam-pirenena ny bilaogera sasany ary nandefa ny sainan'ny antokon'ny fitondrana nivadika tao amin'ny bilaoginy izy ireo .
Voalaza fa nanambara ny alahelony noho io hetsika io tao amin'ny tontolon'ny bilaogy ny praiminisitra Maleziana Abdullah Badawi ary niantso izany ho “ratsy”. Nilaza ihany koa izy araka ny tatitra fa tsy hoe tsy manaraka ny lalana na tsy ara-dalàna ny manangana ny sainam-pirenena mivadika, kanefa mbola azo lazaina ho mampalahelo, indrindra fa amin'ny fanombohan'ny fankalazana ny fahaleovantenan'i Malezia faha-51. Nanantena i Abdullah noho izany fa handray fepetra momba izany ny polisy.
Tao amin'ny lahatsoratra navoakany farany, naneho ny hatezerany ilay bilaogera Sheih fa tsy manampy ny mahantra sy ny faran'izay fadiranovana akory ny mpanao politika, na dia eo aza ny fampanantenana natao talohan'ny fifidianana ny volana Martsa 2008. Nolazainy fa sahirana loatra amin'ny fanaovana politika ny mpanao politika ary tsy mihevitra ny hanampy ny mahantra akory. Ohatra, notanisainy ny fanapahan-kevitra vaovao mifandraika amin'ny kioska fivarotana solika miahy tena, izay niteraka tsy fananan'asa sy ny fahasahiranana, indrindra any amin'ireo fanjakana mahantra.
Samy naneho ny alahelony na ny antokon'ny fitondrana na ny antokon'ny mpanohitra, ary somary nitebiteby ny sasany fa hamoaka ny sarin'ny sainam-pirenena mitsimbadika ny Maleziana. Tsy mbola naneho ny heviny kosa ny mpitsara tao amin'ny tontolon'ny bilaogy.
22 Aogositra 08 : Tao amin'ny lahatsoratra fanampiny dia nanambara ny tatitry ny gazety fa efa eo hadihadian'ny polisy ny bilaogera nanentana ny fanaovana sainam-pirenena mitsimbadika. Tsy nanamarika anefa ny tati-baovao raha i Sheih no ilay bilaogera resahana eto na tsia.
Araka ny tatitra, nilaza ny Inspektora Jeneraly Lefitry ny Polisy, Tan Sri Ismail Omar, fa nilatsaka ny tatitra nataon'ny polisy, ary efa eo am-panadihadiana ny hetsika araka ny Lalànan'ny Fikomiana 1948 ny polisy. Nanda ny hanonona ny anaran'ilay mpitory i Ismail ary tsy nanamarika raha toa ka ilay bilaogera ihany no hanaovana fanadihadiana, na hohadihadiana ihany koa ireo olon-kafa izay nanao toy izany.